असार भित्रै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने हो ? तुरुन्तै आवेदन दिनुस्  BikashNews
असार भित्रै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने हो ? तुरुन्तै आवेदन दिनुस्
२०७५ असार ४ गते १०:१० विकासन्युज
काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा परिषदले असार भित्रै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने भएको छ । परिषदले चालु आर्थिक बर्षको कार्याक्रम अन्तर्गत शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितोमा राखेर ३५ जनालाई ऋण दिन लागेको छ ।
परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले १५ दिन भित्र जिल्ला कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन आव्हान गरेको बताए । उनले प्रमाणपत्र धितो राखेर प्रत्येक प्रदेशका पाँच-पाँच जना युवा उद्यमीलाई अधिकतम २ लाख रुपैंयाँसम्म ऋण दिन लागेको बताए ।
अर्थमन्त्रालयले आइतबार युवा उद्यमका लागि प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ पारित गरेसँगै सहकारी संस्थाहरु मार्फत ऋण उपलब्ध प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
स्नातक उतिर्ण वा प्राविधिक शिक्षमा डिप्लोमा गरेका विद्यार्थीहरुले आफ्नो व्यवसायीक योजना पेश गरेर ऋण माग्न सक्नेछन् ।
१५ दिन भित्र आफ्ना जिल्ला कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिने परिषदले जनाएको छ ।
परिषदको अगुवाई तथा युवा स्वरोजगार कोष र श्रम मन्त्रालयको सहभागीतमा प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि बढ्न लागेको हो । सो कार्यक्रमका लागि परिषदले चालु आर्थिक वर्षमा ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी अािर्थक वर्षको बजेटमा अघि सार्न लागिएको ७ लाख ऋण कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम पनि परिषदले नै गर्ने पनि ढुंगेलले जानकारी दिए ।
तोकिएको समयभित्र पूँजी वृद्धि गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थान सक्षम छ : कविप्रसाद पाठक
बोर्ड अध्यक्षमाथि ब्राेकरकाे दर्जन बढी आरोप : २५० शाखा खाेल्छु भन्दा नसुन्ने, पूर्वाग्रह राख्ने ?
निर्माणको चरणमा नेपाल कै ठूलो पञ्चासे केबलकार, १० हजार नेपालीले रोजगारी पाउने
१९ बीमा कम्पनीले गरे २ खर्ब २८ अर्ब लगानी, कुन कम्पनीको कति ?
ओली सरकारको १ वर्षः वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता १५० प्रतिशतले बढ्यो
बैंकहरुले वित्तीय साक्षरतामा प्रत्येक प्रदेशमा १० करोड खर्चनु पर्ने, ४५ प्रतिशतको पहुँच बढ्ला ?
इन्धनकाे पैसा नतिरेपछि मयुरकाे बस समातियाे, किस्ता तिर्न बैंककाे ताकेता
१९ हाइड्राेपावरको १ खर्बकाे शेयर चैत ७ गतेदेखि, प्रतिकित्ता १० रुपैंया ‘कल इन एड्भान्स’
एकाएक किन बढ्यो मंगलबारको सेयर बजार ? यस्तो छ कारण
कसले पाउँछ वेरोजगारी भत्ता ? के हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
पुँजीगत र संरचनागत संकटबाट बाहिरिएकाे एनसीसी बैंक र अबकाे बाटाे